ဇန်နဝါရီလ 2, 2018
ဒူဘိုင်းအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး ?. အဘယျကွောငျ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ ?. အမှန်တကယ်, ဒူဘိုင်းမွကွေီးပျေါမှာကိုအကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမတစျဦးဖွစျသညျ။ အဘယ်သူမျှမမေး, ဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့ရှာဖွေနေတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး။ ထိုအခါယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာအစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံးအခွန်လွတ်လုပ်ခအဘို့အကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်စော်ဘွားအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့။ သငျသညျအရပျကိုတစ်ဦးအတွက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ် စျေးကွက်အတွက်ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေနည်းလမ်းများကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်။
ဒူဘိုင်းကိုလည်းအလွန်စီးပွားဖြစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်, တော်ဝင်မိသားစုဝင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေ။ ဤသည်အံ့သြဖွယ်ရာအရပျက၎င်း၏အရှိဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်များအတွက်နာမည်ကျော်မြို့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းမြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမြို့အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာရဗီကမ်ဘာပျေါတှငျအသက်တာ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဤအရပ်ဌာနကိုအကောင်းဆုံးနှင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစျဦးဖွစျသညျ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဝကို။ စော်ဘွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဗဟိုချက်၌, သင်လုပ်နိုင်သည် ရှာဖွေစုဆောင်းရာမှအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရ.
တစ်ဦးအဖြစ် အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုကျန်းမာ၏ပုံဥပမာ။ ဤအရပျကမ်ဘာပျေါမှာကမ္ဘာ့ထင်ရှားသောမြို့ကြီးများ 5th ဖြစ်လာသည်။ နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ဤမြို့ကိုအလျင်အမြန်ဖြစ်လာနေသည် အများဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုရာအရပျ အကောင်းဆုံးကိုအမှုဆောင်အရာရှိအလုပ်လုပ်ဘို့။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းဝတ်အစားမှ အများကြီးပိုခက်သောနေရာများအတွက်အလုပ်သွားရှာဖွေတာ ထိုကဲ့သို့သောစင်္ကာပူ, လန်ဒန်နဲ့ပဲရစ်အဖြစ်။ တောင်မှအတူတကွနယူးယောက်, ဟောင်ကောင်, ဒိုဟာနှင့်အတူခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်ထိပ်ဆုံး rated သောနေရာများနှင့်အတူ, မွမ်ဘိုင်း.
2018: D ခုနှစ်တွင်ubai အဆင့် မယှဉ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်စီးပွားရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ ဒါ့အပြင်အညီအမျှအရေးကြီးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူတို့အဘို့ခြုံငုံဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်, ဒီ မြို့သစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အိပ်မက်၏နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည် အရည်အသွေးနှင့်လူနေမှုဘဝများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏စည်းကမ်းချက်များကို။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြံပေး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေအင်ဂျင် နှင့် ဒေသခံစုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်တစ်ဦးအလုပ်အစာရှောင်ရနိုငျသညျ!.
ပထမဦးစွာကအကောင်းဆုံးလတ်ဆတ်သောအဘို့ယူအေအီးမြို့ကြီးများအဆင့် ဘွဲ့ရများနှင့် 2018 အသစ်ပြည်တော်ပြန်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဘူဒါဘီ, စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒူဘိုင်းနှင့် Sharjah လည်းအာရဗီစီးပွားရေးကမ္ဘာ့ဖလားမှာနေထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးမြို့တို့တွင်ထိပ်တန်း rated ဖြစ်လာသည်။
များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စစ်တမ်းများတွင် 2018 နှင့် 2019 အတွက် ကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းမန်နေဂျာများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာအဆင့်။ တဖန်သင်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေသည့်အခါသူတို့အခွအေနမြေားအောက်မှာ။ သင် ... သင့်တယ် ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဤမြို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဒုသမ္မတနှင့်, စားဖိုမှူးအလုပ်အမှုဆောင်အရာရှိပင်ပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုလာပြီ။ ထိုကိစ္စတွင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို C-level ကိုအမှုဆောင်အရာရှိလိမ့်မည် အသက်တာ၏ပိုကောင်းတဲ့အလုံးစုံအရည်အသွေးမြင့်လက်ခံရရှိ နှင့်အများကြီးပိုကောင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လစာအခြားသူများအားနှိုင်းယှဉ်။
တစ်နှစ်ကျော်, ကြီးမားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမှလာမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ရှာဖွေသူများ ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးတပ်မက်လိုချင်သောအလုပ်တည်နေရာအဖြစ်။ သူတို့ကိုအဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့အဘို့တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်နီးပါးနီးပါး အိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများ 8,000 ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှာဖွေနေ။ ဒူဘိုင်းအပေါင်းတို့၌ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအထက်တိုင်းစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်မှတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအသစ်သောအွန်လိုင်းအလုပ် site ကိုအမြဲရှာဖွေနေနှင့်အတူ သင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များသတင်းအချက်အလက်များအတွက် အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့။ အကောင်းဆုံးအခွက်တဆယ်စုဆောင်းမှုအလုပ်ဆိုဒ်များ၎င်းတို့၏စာရင်းကို၏ထိပ်ပေါ်မှာဒူဘိုင်းရှာဖွေစုဆောင်းအေးဂျင့်ထား၏။
ယင်းအပေါ်အကောင်းဆုံးမြို့ ဂြိုလ်ဒူဘိုင်းဖြစ်လာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ အားလပ်ရက်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ပူပြင်းတဲ့အစက်အပြောက်အပေါ်ဧည့်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ။ ရှိပါတယ် မွို့၌ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကို။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်အသစ်ဧည့်သည်များကြောင့် High-မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၏ဤအရပ်ဌာနကိုချစ်ကြတယ်။ သို့သော်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်သင်ကအလုပ်လုပ်ဗီဇာရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတွေ့ပုံကိုသိရန်လိုအပ်.
အဆိုပါ ဒူဘိုင်းအုပ်စိုးသောမင်းကို ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းမှသေးငယ်တဲ့အစိုးရအနေဖြင့်တပြင်လုံးကိုဒေသအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် တောအရပျကနေကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများတ။ ယင်းဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဦးတည်ရာအများစုမှာ ပို. ပို. ဆောင်ခဲ့ ယူအေအီးမှဧည့်သည်များ။ သင်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ sweam နိုင်ပါတယ်သင်မူကားအရောင်းလျှော့စျေးများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်မသာ။
အားလုံးပတ်ပတ်လည်စော်ဘွားအတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရောင်ခြည်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ယူအေအီးမိသားစုပျော်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ၏မြို့တော် ယူအေအီးကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ကျော်ကြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့ထိုကဲ့သို့သော Burj Khalifa အဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုအဘို့ဤအရပ်၌ချစ်ကြတယ်။ ဤရွေ့ကား, တရားဝင် GCC ပေါ်တွင်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ပို. ပင်, နေရာတွေသင့်မိသားစုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သိတငျးကိုဒူဘိုင်းစျေးဝယ်ကုန်တိုက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒူဘိုင်းအမြဲမည်သူမဆိုများအတွက်ပြည့်စုံလာပါတယ်။ သင့်အနေကနေအများအပြားဆွဲဆောင်မှုရှေးခယျြနိုငျ ကြီးမားသောငါးပြတိုက်နှင့် Indoor နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်း။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ဤမြို့သည်အများအပြားယဉ်ကျေးမှုပျေါလှငျရှိပါတယ် ဧည့်သည်များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်။ လူအပေါင်းတို့သည်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကျော်ထဲမှာလုပ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါသည်။ ဤအရပ်ဌာန၌အဆိုပါကားများအများဆုံးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနှင့်ခေတ်သစ်အတွက် add-ons တွေကိုရှိခြင်းဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုလည်း တွေ့ရှိချက်ထဲမှာဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်တော်ပြန်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထောက်ခံပါသည်။ စော်ဘွားအတွက်ပြည်တော်ပြန်သူတို့ကအံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအထဲမှာသူတို့ရဲ့ရေနံငွေရှာနှင့်သုံးဖြုန်းဖို့ချင်ပါတယ်။ ဂလိုဘယ်အခွက်တဆယ်အမှုဆောင်အရာရှိအမြဲစော်ဘွားအတွက်ကြိုဆိုပါတယ်နေကြသည်။ စင်္ကာပူ, နယူးယောက်, လန်ဒန်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် Capital ကိုကုမ္ပဏီများနှင့်အတူဒူဘိုင်းပူးပေါင်းကုမ္ပဏီအများအပြား။
ခေါင်းဆောင်မှုစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ ထိုကဲ့သို့သော Adecco, Bayt နှင့် GulfTalent နှင့်အခြားသောအဖြစ်။ ယူအေအီးရှေ့ဆက်စုဆောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်အခြားနိုင်ငံများမှအဆင့်။ အဆိုပါ အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေနံ-based ကဏ္ဍများတွင်များမှာ။ အသစ်ကအမှုဆောင်အရာရှိဆွဲဆောင်များအတွက် No.1 ဒေသအဖြစ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ဤအကြောင်းပြချက်စီးပွားရေးသည်။ အကောင်းဆုံးအခွက်တဆယ်ကိုအမြဲယူအေအီးအတွက်ကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေနေ။ ထိုအရပ်၌သင်လုပ်နိုင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်တကမ္ဘာလုံးအလုပ်အခွင့်အလမ်းများရ.
ယေဘုယျအားဖြင့်အချို့အလုပ်ရှာဖွေသူများစကားပြောကအံ့သြစရာရှိပေလိမ့်မည်။ မသာကြောင်း ဒူဘိုင်းယူအေအီးမှာအလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ထားပြီး။ ကျွမ်းကျင်သူများကိုလည်းရှီးနှင့်အဘူဒါဘီဘို့အတော်လေးကောင်းစွာ rating ။ အခါသင်ဂလိုဘယ်အလုပ်ရှာဖွေလည်းရရှိနိုင် စော်ဘွားကုမ္ပဏီများနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအခြေချ.
ရေရှည်မှာမှာတော့ဒူဘိုင်းစီးတီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများကလူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဓိကကလူဖြစ်ကြ၏။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအလုပ်အကိုင်အဘို့, ရှာဖွေနေသူဒီတိုင်းပြည်များ၏အရှိန်အဟုန်ကိုအသိအမှတ်မပြု။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေးဂျင့်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီကိုရှေးခယျြဖို့အများကြီးပြည်တော်ပြန်ဦးဆောင်လမ်းပြ အသက်ရှင်အလုပ်နှင့်တက်ကြွစွာအာရပ်စီးပွားရေးလောကမှာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့နေရာအဖြစ်။
သူတို့အခွအေနမြေိုးအလုပ်ရှာဖွေသူများ အစားစံအလုပ်ဆိုဒ်များ။ အခုတော့ paid အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်များကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သောကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်လျှင် ဒူဘိုင်းအတွက် 10 နှစ်ကျော်သည်။ ဒါဟာဒေသခံစော်ဘွားအလုပ်ဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ကအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဧကန်အမှန်အပါကစ္စတန်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ ထိုကဲ့သို့သော CEO ဖြစ်သူနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာ (MG) အဖြစ်တောင်မှအလုပ်နေရာလွတ်။ သို့မဟုတ် MBC အုပ်စုတစ်စုနှင့်ယူအေအီးအတွက် Insead Alumni အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအလုပ်အကိုင်အဘို့, ရှာဖွေနေသူအရည်အချင်းပြည့်လုပ်သားတွေပိုမိုကြီးမားနံပါတ်များကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ နှင့် သူတို့ယူအေအီးမှာအလုပျလုပျဖို့လာမယ့်နေကြသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အိန္ဒိယကနေပိုပိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဖြစ်ကြောင်း စော်ဘွားအတွက်အချိန်ပိုမိုကာလအဘို့တည်းခို။ အင်ဂျင်နီယာစျေးကွက်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှစ်စဉ်ပိုပြီးလူတွေ ဖိတ်ခေါ်. ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကနိုင်ငံတကာအမှုဆောင်အရာရှိဘို့ရှိသမျှကိုနေရာလွတ်မရရှိနိုင်စေသည်။ ဤသည်အံ့သြဖွယ်အာရပ်မြို့တစ်ဆွဲဆောင်မှုပေါင်းစပ်စေသည် များစွာသောလူအဘို့အခွင်အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့.
စော်ဘွားများတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အအတော်များများရှိပါတယ် 2020 အတွက်ဆွဲဆောင်မှုအခွင့်အလမ်းများ။ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်ကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်လာနှင့်သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီအများအပြားနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ရန်။ သငျသညျရှိသည်ဖို့လိုအပ် ယူအေအီးအတွင်းပိုင်းက high-quality အတှေ့အကွုံနဲ့စတင်။ ဤနေရာတွင်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်အဘယ်မှာတတ်နိုင် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ရှည်လျားသောဝေါဟာရများကိုအတှေ့အကွုံတည်ထောင်ရန်.
ဒူဘိုင်းဦးပိုင်သည်အတွက်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှာယူဆွတ် Almulla ချုပ်မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ် ဒူဘိုင်းစီးပွားရေး တစ်ဦးယူအေအီးအမျိုးသားရေးနှင့်တစ်ဦး EMBA alumnus တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးကျွမ်းကျင်သူများ၏ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးအပေါ်အမြဲပြောနေ။ ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရမ်းအကြိုးဖြစ်ပါသည် မန်နေဂျာနှင့်ဦးဆောင်အမှုဆောင်အရာရှိသည်။ ယူအေအီးအမျိုးသားရေးအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ပြည်ပရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအစဉ်အမြဲ ထိုကဲ့သို့သောအသိအမှတ်ပြုမှုကိုလက်ခံရရှိရန်မြင့်တက်.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနေ့လယ်စာအထူးဝန်ဆောင်မှုများကိုရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ငါတို့ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေ ထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအဖြစ်။ 2009 ကတည်းကကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း applications များစီမံခန့်ခွဲခြင်းနေကြသည်။ သောမျှော်လင့်ချက်အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်အလုပ်သစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် expatriates.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီလျင်မြန်စွာတစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များ site ကိုဖြစ်လာသည်နှင့် ယူအေအီးအတွက် No.1 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပံ့ပိုးပေး။ ဒါကြောင့်တိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်များအတွက် CV ကို upload တင်လို့ရပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစကားပြောရဖို့ခဲယဉ်းဖြစ်ကြသည်။ ထိုလူတိုင်းသိတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်အတူပြုလုပ်ရဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ အခါသင် ယူအေအီးအလုပ်ဈေးကွက်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်စတင်ရန် သင်အလွယ်တကူဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, များစွာသော အလုပ်ရှာဖွေသူများက MBA အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကြှနျုပျတို့၏ website မှ CV ကို upload။ နှင့်ဤအမှု၌, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဖို့ရှာကြသည်ဆိုပါကနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါနှင့်အစာရှောင်အလုပ်အကိုင်ရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွှတ်တင်ခြင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအပိုင်းကိုသုံးပါ။ အပြုသဘောဘက်တွင်သင်သည်တစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေလျှင်။ ကျနော်တို့ပေးနေကြတယ် ယူအေအီးအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများ။ သငျသညျဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကြှနျတျောတို့၏ကိုယ်စားလှယ်မှသင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita upload တင်သင့်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် ဒူဘိုင်းအလုပ်နှင့်အသစ်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သနည်း။ ကလူယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အစီမံခန့်ခွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယူအေအီး၌မသာအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေသည်။ ငါတို့သည်လည်းကာတာနိုင်ငံ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အဲဂုတ္တုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်ကူညီနေတာပါ။ သို့သော်ငြားလည်း, ကျနော်တို့ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုဒ်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းက စီမံခန့်ခွဲခြင်းအလုပ်အကိုင်များလျှောက်လွှာ အိမ်အတွင်း၌။ တိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူသင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ရန် အင်ဒီးယန်းအဘို့အစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ် Finder အစီအစဉ်ကိုကုမ္ပဏီများသည်။ ကျိန်းသေသင်တို့အဘို့ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်သွင်းခြင်းအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေသောအလုပ်ရှာဖွေသူ၏ထိပ်တွင်။ ရွေးချယ်ဖို့အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ဈေးကွက်ထဲကနေပြည်ပရှိ သူတို့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်များနှင့် HR ကုမ္ပဏီများအား CV ကိုအပ်လုဒ်တင်ခြင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစမတ်နည်းလမ်းပရီမီယံအပ်လုဒ်တင် option ကိုရရှိရန်နှင့်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအသင်တို့အဘို့, တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် အသစ်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
သူတို့အခွအေနမြေိုး, အထောက်အထား ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေး။ တိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူအဘူဒါဘီအတွက်ကောင်းစွာ-paid အလုပ်ရနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ အသုံးပြု. အလုပ်ရှာတွေ့နိုင်ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည် အလုပ်နှင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်း။ မြင့်မားသောငွေပေးချေမှုယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အစီမံခန့်ခွဲအမှုဆောင်အရာရှိ။
အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်။ သူတို့အလုပ်သူတို့လျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ရန်တဲ့သူတိုင်းအသစ်ကလူတစ်ဦး။ ကျိန်းသေတစ်ဦးလက်ခံရရှိ အလုပ်ရှာဖွေ tool ကို။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုပုံသူတို့ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ကာတာ, ဂျော်ဒန်နှင့်အဲဂုတ္တုပြည်၌စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ, headhunters, စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ လည်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိအပန်းဖြေလမ်းညွှန်မှာကြည့်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့ တိုင်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကူညီပေးနေ ယူအေအီးမှာသူတို့ကိုအားမရဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ချင်ပါတယ်တဲ့သူကနိုင်ငံတကာလူတွေကိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ တစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ကျော်လာ. အဘယ်ကြောင့်ဒူဘိုင်းအင်ဒီးယန်းများနှင့်ပါကစ္စတန်အဖြစ်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး ?. ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ဗီဇာလက်ခံရရှိပြည်သူ့။ တစ်ဦးအတော်လေးအစာရှောင်လမ်းအတွက်။
သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ကယ်တင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး ?. ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေတာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။
ယခုသင်သည်အပေါငျးတို့သတို ယူအေအီးဘဝအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။ သငျသညျကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ကြိုးစားသင့် ဟိုတယ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများ။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ကယ့်ကိုအကောင်းနှင့်ရိုးသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်မရနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအလုပ်အကိုင်အစာရှောင်ခြင်းအရကူညီပေးနေနေကြသည်။
ဒါကပြောဖြစ်တယ်, ကျနော်တို့၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ 2019 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလူနေမှုပုံစံစတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးပေး နှင့်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီမျှော်လင့်ပါတယ် အနာဂတ်ကာလ၌ 2020။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များသတင်းများအတွက်သုတေသနနှင့်ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ဘလော့ပေါ်မှာတင်။ သငျသညျအလုပျအတှကျရှာကြသည်သင်သင့်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူများလျှင်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများအားကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload အဘယ်သူသည်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အဆင့်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေမန်နေဂျာများအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကို C-အဆင့်အဖြစ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုပါကဒါကြောင့်ကျနော်တို့လုပ်နိုင် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကိုအခွင့်အလမ်းများပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် site ကိုမှအကြီးတန်းမန်နေဂျာများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအလုပ်အမှုဆောင်မန်နေဂျာရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူသင့် ဒူဘိုင်းမြို့စဉ်းစားပါ အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အဘို့။ စော်ဘွားအဆိုပါဖြစ်ပါသည် အိုင်တီနှင့် Google အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ. ဒူဘိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်း၏ CV ကို Upload လုပ်ပါအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက? အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအတစ်စတင်ရန် အသစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ဒူဘိုင်း!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့.